Jaamacada Qabridahar Oo Dhismaheedu Meel Fiican Marayo - Cakaara News
Qabridahar(cakaaranews) Isniin 24ka April 2017. Bulshada shaqo abuurka kaheshay dhismaha jaamacada qabridahar ayaa aad u bogaadiyay iyadoo Jaamacada qabridahara ay tahay jaamacdii labaad ee deegaanka soomaalida itoobiya islamarkaana uu dhismaheedu marayo 54%.
Hadaba, kasakow horumarka balaadhan ee lagafilayo jaamacada qabridahar ayaa hadana waxaa shaqo abuur kahelay dhalinyar badan oo ah iskaashatooyin kakalshaqeeya dhismaha qaybahooda kaladuwan iyo adeegyada kale ee dhismaha. Sidaas darted qaarkamid ah bulshada shaqo abuurka ka helay oo u waramay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in aad ugu faraxsanyihiin jaamacada qabridahar islamarkaana ay kaheleen shaqooyin kaladuwan. Waxayna tilmaameen in caruurtooda iyo bulshadooduba ay u tahay horumar balaadhan oo u soo hooyday dhamaan deegaanka soomaalida itoobiya.
Sikastaba ha ahaatee, jaamacadan qabridahar ayaa hada wajiga hore dhismaheedu ka koobanyahay 21 block oo ah guryihii ardayda iyo kalasyadii waxlagubaranayay. Waxaana lafilayaa in ay waxbarashada baajka 1aad ay bilaabi doonta sanadkan fooda inagu soohaya ee 2010 T.I.